Shabaab oo xaqiijisay dilka Godane - BBC Somali
Shabaab oo xaqiijisay dilka Godane
Image caption al-Shabaab waxay sheegeen in hoggaamiyahooda cusub uu yahay Axmed Cumar Abu Cubeyda
Al-Shabaab ayaa xaqiijisay dilka hoggaamiyahoodii Axmed Cabdi Godane oo 37 jir ahaa, oo Mareykanku ku dileen weerar dhinaca cirka ah oo ka dhacay koonfurta Soomaaliya.
Hadal qoraal ah oo ka kooban lix bog oo ku qoran af carabi iyo Ingiriisi oo ka soo baxay al-Shabaab ayaa lagu sheegay inuu dhintay Axmed Cabdi Godane, iyaga oo intaa raaciyay inuu beddeli doono Axmed Cumar Abu Cubeyda.
Ninkan cusub ayaa la sheegayaa inaan wax badan laga aqoon, inkasta oo dadka ka faallooda arrimaha al-Shabaab ee Soomaaliya ay sheegayaan inuu ka tirsanaa madaxda al-Shabaab ee gobollada Baay iyo bakool.
Soomaaliya waxa ay ku jirtaa feejignaan la iska ilaalinayo weerarro aar goosi ah oo ka yimaada kooxda Islaamiga ee al-Shabaab, feejignaantaasi waxaa ku baaqay madaxda dowladda Soomaaliya, kaddib markii la dilay hogaamiyihii al-Shabaab Axmed Cabdi Godane oo 37 jir ahaa.
Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay shalay in ay ku dileen Axmed Godane weerar dhinaca cirka ah oo ay ka sameeyeen koonfurta Soomaaliya toddobaadka horraantiisi.